ढल्यो संगीतको धरहरा , – ABC KHABAR
June 7, 2016 June 7, 2016 ABC Khabar कला
अलविदा अम्बर गुरुङदाई
काठमाडौं, २५ जेठ । नेपाली संगीतको ऐतिहासिक धरोहर राष्ट्रगानका संगीतकार अम्बर गुरुङको मंगलबार बिहिान २ बजे निधन भएको छ । काठमाडौंको ग्र्याण्डी अस्पतालमा उपचाररत गुङको ७९ बर्षको उमेरमा निधन भएको उनको पारिवारिक श्रोतले जनाएको छ ।
नेपाली संगीतको विकासमा महत्वपूर्ण मियोको रुपमा उदाएका वरिष्ठ संगीतकार अम्बर गुरुङलाई यो भन्दा अगाडि भारतको मेदान्त अस्पतालमा लामो समय उपचार गरी फर्काइएको थियो । गुरुङ ब्लड प्रेसर घटेर अचानक बेहोस भएपछि गुरुङलाई अघिल्लो गत सोमबार अस्पताल भर्ना गरिएको थियो । उनी एस्पिरेसन, निमोनिया, पेट तथा अन्ननलीको रक्तस्राव, युजीआइ ब्लिडिङ, पार्किन्सोनिज्म, उच्च रक्तचाप र मधुमेहबाट पीडित थिए ।
नेपाली संगीतमा त्यस ताका रहेका नरायाण गोपाल, बच्चु कैलास, भिम विराग र फत्तेमानहरुसँगैका साधक अम्बर गुरूङको ७९ वर्षका भएका छन् । उनको भारतको दार्जिलिङमा भएको हो । वि.सं. १९९४ मा जन्मेका उनी नेपाली गीतसंगीतको क्षेत्रमा २०१६ सालबाट प्रवेश गरेका हुन् । उनले भारतको कलकत्ताबाट दुई गीत ‘म अम्बर हुँ’ र ‘सम्हालेर राख’ बाट गीति लेखन प्रारम्भ गरेका थिए ।
उनले कोलकातामा पहिलोपटक सन् १९६१ मा अगमसिंह गिरीको गीत ‘नौ लाख तारा उदाए’ पहिलो पटक रेकर्ड गराएसँगै नेपाली संगीतमा प्रवेश गरेका गुरुङले नेपाली सांगीतिक फाँटमा प्रसिद्धी कमाएसँगै पछिल्लो पटक नेपालको राष्ट्रिय गानको संगीत भरेका छन् । उनले यसअघि नेपालको सयौँ कालजयी गीतहरुको संगीत भरेका छन् । उनी खासगरी नेपालको राष्ट्रिय गान सयौँ थुंगा फूलका को संगीतकार हुन् ।
बाबु उजीरसिंह गुरुङ र आमा श्रीमती रेणुका गुरुङको कोखबाट भारतको दार्जिलिङको लालढिकीमा उनको जन्म भएको हो । सेनाको जागिरे परिवारमा जन्मेका गुरुङका बुबामात्र होइन, हजुरबुबा देवराज गुरुङ पनि सेनामा जागिर थिए । गुरुङको पूख्र्यौली घर नेपालको गोरखा जिल्लाको रिसिङमा रहेको छ । गुरुङको ३ छोरा र १ छोरी छन् । किशोर, राजु तथा शरदमणि र १ छोरी अलकाका पिता गुरुङले आई.ए.सम्म मात्र अध्ययन गरेका थिए । उनी ०५२ सालमा नेपाल राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठानको संगीत निर्देशकसमेत रहिसकेका छन् । एक हप्तामै ५ सयप्रति बिक्री भएको यो गीत भारतविरोधी भन्दै अल इन्डिया रेडियोमा प्रतिबन्धित भएको थियो । पछि यही गीत नेपालीले धेरै मन पराए ।
तत्कालीन समय राजा महेन्द्रले यही गीत मन पराएर अम्बरलाई उनको जन्मोत्सवको उपलक्ष्यमा नेपाल बोलाउने गरेका थिए । उनी विसं.०२५ सालमा पहिलो पटक नेपाल आएका उनी ०२६ सालमा (दोस्रोपटक) नेपाल आएका बेला पनि राजा महेन्द्रले फेरि एकेडेमीमा बस्न प्रस्ताव दोहो¥याएपछि गुरुङ नेपाल आएर बसेका हुन् । उनले वि.सं. ०२६ मा संगीत विशेषज्ञका रूपमा नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा प्रवेश गरेका थिए । संगीत प्रमुख, संगीतसंयोजक र संगीत निर्देशक भएर वि.सं. २०५४ मा अवकाश पाएका उनले लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको गीतिनाटक कुन्जिनी, मुनामदनमा संगीतांकन गरेका छन् । उनले सत्यमोहन जोशीका ४ नाटकलगायत माधवप्रसाद घिमिरेको ‘मालती मंगले’मा समेत संगीत दिएका छन् । उनले चलचित्र ‘मनको बाँध’, ‘जीवनरेखा’मा पृष्ठसंगीत र पाश्र्वसंगीत दिएका छन् । त्यस्तै आदिकवि भानुभक्त वृत्तचित्रमा पाश्र्वसंगीतमा स्वर दिएका छन् ।
उनले अक्षरका आवाजहरू, कहाँ गए ती दिनहरू, कहिले लहर कहिले तरंग, सम्हालेर राख जस्ता कृतिहरु प्रकाशन गरेका छन् । गुरुङलाई जगदम्बाश्री पुरस्कार, गोरखा दक्षिणबाहु चौथो, गिरी पुरस्कार गुठी दार्जिलिङबाट १ लाख रुपैयाँ नगद प्रमाणपत्र, इन्द्रराज्यलक्ष्मी पुरस्कार, छिन्नलता गीत पुरस्कारलगायतका विभिन्न साहित्यक तथा सांगीतक संघसंस्थाहरुले अनगिन्ती सम्मान तथा कदर पत्र प्रदान गरेका छन् ।
वरिष्ठ संगीतकार अम्बर गुरुङको पार्थीव शरिरलाई श्रद्धान्जलीका लागि प्रज्ञाभवन कमलादीमा राखिने भएको छ । शवलाई ११ वजेबाट ३ बजेसम्म प्रज्ञामा राखिएपछि मंगलबार नै पशुपतिमा अन्तिम संस्कार गरिने जनाइएको छ । अन्तमा नेपाली संगीत उद्योगका मुर्धन्य वाङमय स्रष्टा अम्बर गुरुङप्रति श्रद्वा सुमन ।
अलविदा अम्बर दाई…
म दुर भएर के भो
यति रोएर जीन्दगीमा